Ekpere nye San Martín de Porres. ? Maka Anụmanụ na Ọrịa.
Choputa na ntanetị ▷ ➡️
Pịa ESC imechi
Ekpere Saint Martin nke Porres
5 Mingụ Nkeji
Ekpere Saint Martin nke Porres, bụ ngwa ọgụ dị ike n’aka ndị na-ejidesi okwukwe siri ike ike. Na ekpere San Martin de Porres Ọ na-anọchite anya nzọpụta n'ọtụtụ ọnọdụ ahụike yana metụtara ndị nwere agba.
Mgbe ọ dị ndụ, ọ baara ndị nọ n'ụlọ ọgwụ nwere nnukwu ahụ ike ọrịa.
San Martín de Porres bụ senti a ma ama na South America n'ihi ọtụtụ ọrụ ebube enyere ya aha ya ogologo oge tupu iti ya.
Ndepụta nke ọdịnaya
1 Ekpere Saint Martin de Porres na-bụ ọnye?
2 Ekpere San Martín de Porres maka anụ
3 Ekpere San Martín de Porres maka ndị ọrịa
3.1 Kedụ mgbe m nwere ike ikpe ekpere?
Ekpere Saint Martin de Porres na-bụ ọnye?
Amuru ya na Lima, Peru na 1579, bụ ọkpara nke ụmụnne abụọ, nna ya nke Peru na nne ya bụ nwanyị nwere akpụkpọ agba nke a mụrụ na Panama.
Mgbe nna nna ya anabataghị ya, a hapụrụ ya n'aka Doña Isabel García, onye bi na San Lázaro, n'obodo ndị nwere agba na-ebi.
Mgbe ọ dị obere ọ malitere ịzụ dị ka akwụkwọ ọkụ ma si ebe ahụ malite ọrụ ịmụ ọrụ ya ụwa Nke ogwu.
Ọ malitere nkwadebe okpukpe ya na Dominican convent nke nwanyị anyị nke Rosary mana a jụrụ ya nke ukwuu n'ihi ụda mulatto nke akpụkpọ ahụ ya.
Agbanyeghị, Martin kwụsiri ike na omume ya, na-ekpe ekpere n'oge ma ghara ileghara ihe omume ya ọ bụla anya, ghọrọ ihe atụ maka ndị ọzọ.
A hụrụ onyinye ya maka ịgwọ ọrịa na mmadụ na anụmanụ, ndị ọrịa niile Martin gwọchara natara ọgwụgwọ, n'ọtụtụ oge, ozugbo.
Nke a mere ka o nwee aha ọma na ama ndị ọrịa chọrọ ka o lekọta ya.
Ekwuru na, ewezuga onyinye ịgwọ ọrịa, enyere ụfọdụ ndị ọzọ ya, dịka onyinye nke asụsụ na ọbụna onyinye ịnwere efe.
Ekpere San Martín de Porres maka anụ
Onye agọziri agọzi ka ị bụ, Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile, Onye kere ihe niile dị ndụ.
N'ụbọchị nke ise na nke isii nke okike, I kere azụ n'oké osimiri, nnụnụ na mbara igwe na anụmanụ dị n'ụwa.
I nyere mmụọ nsọ San Martín de Porres ịtụle anụmanụ niile dịka ụmụnne ya. Anyị na-arịọ gị ka ị gọzie anụmanụ a.
Site n'ike nke ihunanya gị, kwe ka anumanu jiri obi gi mee ochicho gi.
Otito diri otuto gi. Onye agọziri agọzi ka ị bụ, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.
Na-ekpe ekpere Saint Martin de Porres ekpere maka ụmụ anụmanụ na okwukwe.
Rịọ maka ahụike nke anu ulo anyị ọ bụ omume ịhụnanya nke ọtụtụ mmadụ na-eche bụ igbu oge.
Anụ ụlọ anyị na ndị nọ n'okporo ụzọ, n'agbanyeghị agbụrụ ma ọ bụ anụmanụ, nke ọ bụla n'ime ha nwere onye enyemaka na San Martín de Porres nwere ike inye ha ahụike ka ha wee bie ndụ ndụ.
Ekpere San Martín de Porres maka ndị ọrịa
Ezigbo San Martin de Porres.
Ìhè nke ndị dị umeala n'obi, nsọ nke nnukwu okwukwe, nye gị nke Chukwu nyere ike ịme ihe ịtụnanya dị egwu, taa, a na m abịakwute gị na mkpa na uju ahụ na-eju m afọ.
Bụrụ onye nchedo na dọkịta m, onye na-arịọchite m na onye nkuzi m n’ụzọ nke ịhụnanya maka Kraịst.
Gị onye maka ịhụ Chineke na ụmụnna gị n’anya, ị daghị mba mgbe niile n’inyere ndị nọ na mkpa aka, nke mere na amaara na Chineke nyere gị ike ịnọ otu oge n’ebe dị iche iche, gee ntị na ndị nwere mmasị n’omume ọma gị, maka ịhụnanya maka Kraịst.
Ekwere m mmekọrịta dị ike nke gị na Chineke nke mere, na ịrịọ arịrịọ n’iru Onye-nwe, na n’ihu mkpụrụ obi dị ọcha dịka gị bụ ịdị mma niile, a ga-agbaghara mmehie m, m ga-enwere onwe m pụọ n’ihe ọjọọ na ihe ọjọọ.
Gogharim imem obi ebere gi na oru m ka m jee jiri obi gi jeere gi ozi nyefee umunne m ime ihe oma.
Ihe m chọpụtara dịka gị, otu esi imere ndị ọzọ ihe ọma, obi na-amapụ m.
Ka ihe nlere anya nke ichoro onwe gi, mgbe nile na ebe ikpe azu, buru ibu nke ihuru m, ka m ghara ichezọ di umeala.
Ka ncheta nnukwu okwukwe gị, nke nwere ike ịgwọ ọrịa, ịkpọlite ​​n’ọnwụ, na ime ọtụtụ ihe ịtụnanya, diri m n’oge obi abụọ, amara dịgidere na-ejupụta obi m n’ọkụ nke ihunanya n’ebe Kraist nọ.
Nna nke Elu-igwe, site n’ikike nke ohu gị na-ekwesị ntụkwasị, Saint Martin, nyere m aka na nsogbu m ma ekwekwala ka olileanya m ghazie.
Onye-nwe-anyị Jesu Kristi, onye kwuru "rịọ, ị ga-anata", m ji obi umeala na-arịọ gị na, site na ịrịọ arịrịọ nke Saint Martin de Porres, ị nụrụ arịrịọ a.
A na m ario sitere n’ịhụnanya, nye m amara m na-arịọ ma ọ bụrụ maka ọdịmma nke mkpụrụ obi m.
A na m arịọ nke a site na Jizọs Kraịst, Onyenwe anyị.
Ekpere nke Saint Martin de Porres maka ndị ọrịa bụ ọrụ ebube!
Mgbe ọ bụla na-arịa ọrịa Ọ bụ otu n'ime usoro kachasị sie ike na ihe ọ bụla dị ndụ na-emeN'ime mmadụ, ọ na ọnwụ na-ekwu ebe ọ bụ na ọtụtụ ọrịa enweghị ọgwụgwọ sayensị.
Agbanyeghị, enwere ngwa ọgụ dị egwu bụ okwukwe nke na-arụ ọrụ site na ekpere.
Can nwere ike ịrịọ maka ọgwụgwọ nke ọrịa ọ bụla oge niile, ndị nsọ na ọkachasị San Martín de Porres dị njikere inyere anyị aka ma nye anyị ọgwụgwọ nke ahụ anyị ma ọ bụ nke onye ezi na ụlọ ma ọ bụ enyi chọrọ ọrụ ebube ahụ.
Kedụ mgbe m nwere ike ikpe ekpere?
Enwere ike ikpe ekpere oge niile n’agbanyeghi ebe ma obu ọnọdụ.
Ufodu ndi mmadu n’eme ebe-ichu-aja nke uwa ebe ha n’ekpe ugba ututu na ubochi nile, ezi na ulo ndi n’ekpekọ onu ọnụ n’etutu ime ya n’oge nri ututu, si otua gozie ubochi ma goziri ha nke oma.
Mee ahịrịokwu na novenas ma obu kpee ekpere chaplet zuru ezu na San Martín de Porres nwere ike ịbụ ihe dị iche iji hụ ọrụ ebube na ndụ anyị.
Ma ihe ndị a ka aga-emerịrị, kwenye na ọ ga-a atta ntị na ntị anyị oge niile, ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe ahụ, anyị ga na-egbu oge ebe ekpere na-agaghị erute ụlọ nke ụlọ.
Ọ bụ ngwa agha dị ike mana ịmara otu esi eji ya na karịa, na-echeta mgbe niile ịkele ekele maka ọrụ ebube nke o nyere anyị.
Enwere m olileanya na ị ga-enweta enyemaka ịchọrọ n’ekpere nke San Martin de Porres.
Ekpere maka Saint Helena
Ekpere San Marcos de León nke na-abia
Ekpere siri ike maka San Alejo
May nwekwara ike ịmasị
Ekpere San Alejo
Ekpere nye Saint Helena
Ekpere Saint Michael Onye isi ala
Akụkọ ndị ọzọ
Ekpere Santa Muerte maka oru
Ekpere nke Ihe Ebube
Akụkọ gara aga
Ekpere nke atụrụ di nwayọ
Ekpere iji kewaa mmadu abuo
Ekpere Saint Cyprian
Ekpere San Marcos de León
Ekpere Santa Barbara
EKPERE EKPERE MAKA EGO EGO
Ekpere diri Nwa nke Atocha
Ekpere ka obi jua gi obi
Ekpere maka ndi nwuru anwu
Ekpere ka iwepu anya ojoo ya
Ekpere nke Holy Holy ka o buru nwoke
Kpee ekpere ka ị chọta ihe ndị funahụrụ gị
Ekpere ka mụ na ya rọọ nrọ
Ekpere nye Setan
Ekpere San Ramón Nonato
Kpee ekpere ka ị nweta ego ị kwụrụ
Ekpere Saint Charbel
Ekpere maka nne nwụrụ
Ekpere ka m chee
Amaokwu 14 maka ndi Katoliki na-eto eto
Ekpere Santa Muerte ka onye ị hụrụ n’anya laghachi
Ekpere nke obara Kraist
Ekpere ka akpo m
Ekpere Saint Ignatius nke Loyola
Ekpere maka inye gi nsogbu n’adighi nsogbu
EKPERE EKPERE MAKA EGO EGO MAKA EGO
Ekpere maka onyinye
Ihe agha nke Chukwu
Ekpere maka ime ihe
Kpee ekpere nye San Antonio iji chọta ịhụnanya
Ekpere nke Onye-ikpe Ziri Ezi
Ekpere iji dọta nwoke
Ekpere maka baptizim
Ekpere nke Holy Holy
Ekpere maka oru
Ekpere bu Mmuo Nso diri ichem
Ekpere Gọziri Agọzi
Ekpere nye nkpuru obi obula ime ka mmadu bia
Ekpere diri nwa agbọghọ nke Montserrat maka ụmụ nwanyị dị ime
Nwere ike 31, 2020
Ekpere Saint Catherine nke Siena
Nwere ike 30, 2020
Ekpere maka azụmaahịa
Nwere ike 29, 2020
Ekpere San Roque
Nwere ike 28, 2020
Ekpere nke ngozi
Nwere ike 27, 2020
Kpee ekpere ka ihe niile wee gazie
Nwere ike 26, 2020
Ekpere Saint Lasaro
Nwere ike 25, 2020
Ekele diri Nwa Nwanyị Na-amaghị nwoke nke Carmen
Nwere ike 24, 2020
Ekpere siri ike nke 3 iji nweta ọrụ ahụ
Nwere ike 23, 2020
Ekpere ka emee di
Nwere ike 22, 2020
Ekpere Senti Jud Thaddeus maka okwu siri ike ma ju anya
Ekele diri Nwaada nke Guadalupe
Nwere ike 20, 2020
Ekpere ka oghara ichegbu onwe
Nwere ike 19, 2020
Ekpere Maka .mụaka
Nwere ike 18, 2020
Ebube siri ike
Nwere ike 17, 2020
Ekpere ịgọzi nri
Nwere ike 16, 2020
Ekpere maka nkịta na-arịa ọrịa | Jiri okwukwe kpee ekpere ma nyere gị aka ịgwọ enyi gị
Nwere ike 15, 2020
Ekpere na-agwọ iji wepụta ahụ ike gị ọsọsọ
Nwere ike 14, 2020
Ekpere maka ndi m ha laghachite
Nwere ike 13, 2020
Otu esi amata ma ọ bụ ịhụnanya ka ọ bụ enyi
Otu esi echezọ onye ị hụrụ n'anya
Otu esi eme ka nwanyi hu gi n'anya
Otu esi eme ka mmadụ na ibe ya dị ka ndị mmadụ
Tag Ígwé ojii
Nri Ịmụta LOSELA IHE IKU IKU | EBERE ỌRỌ Bible OZI Olee otú Dios Iche iche Ebumnuche Amaokwu Interpretación de los sueños Akụkọ mgbe ochie Usoro mgbakọ na mwepụ Ekpere Popular Santos Otu edemede Nrọ Tebụl Tarot Whatsapp
Atụmatụ Social Netwọk